Akụkọ - nhazi ọkwa njide ọkụ.
Anyị na -enyere ụwa aka ito kemgbe 2004
Nkwado oku 0086-18967751149
Nkwado email leo@anhelec.com
Ngwa USB Ike
200A USB Ngwa
250A USB Ngwa
600A USB Ngwa
Ngwa 630A Ngwa
Njikọ Njikọ njide aka ikiaka
Onye na -ejide ọkụ ọkụ
Onye na -ejide Mov Lightning
Lightning Arrester mapụtara Part
ngwa njide njigide
Ọkụ Shrinkable tube
Oyi Shrinkable tube
LV Ada Ada tube Usoro
Ihe ntụgharị ihe eji etinye akwa
Mita Maka Transformer
Akụkụ ọzọ mapụtara maka ntụgharị
Ihe ntụgharị na nke nwere ike
Ihe ntụgharị 10kV Currnet
10kV ike mgbanwe
20-35kV Ihe Ntụgharị Ugbu A
Busbar Ụdị Ihe Ntụgharị Ugbu A
Igbapu eriri igwe
Usoro usoro mgbanwe usoro
Ihe ntụgharị dị n'elu osisi
Mgbanwe nke nwere ike ịnọ n'elu osisi
Akụkụ MV Switchgear
Usoro arụ ọrụ mgbanaka mgbanaka
Agụụ Circuit emebi na Isolator
Mgbanwe isi mgbanaka mgbanaka mgbanaka
Onye na -egbochi agụụ
Mgbanaka Main Unit mapụtara Part
Nchịkọta njide ọkụ na -emekarị.
Enwere ọtụtụ ụdị ndị na -ejide ọkụ, gụnyere ndị na -ejide ọla oxide, ndị na -ejide oxide metal, eriri na -enweghị eriri, ndị na -ejide jaket metal oxide zuru oke, yana ndị na -ewepu ya.
Ụdị njide ndị bụ ndị njide tubular, ndị na -ejide valvụ na ndị na -ejide zinc oxide. Ụkpụrụ na -arụ ọrụ nke ụdị njide ọkụ ọ bụla dị iche, mana isi ọrụ ha bụ otu, ihe niile iji chekwaa eriri nkwukọrịta na akụrụngwa nkwukọrịta site na mmebi.
Onye na -ejide tube
Onye na -ejide tubular bụ n'ezie oghere nchedo nwere ikike ịgbanyụ ọkụ. Ọ mejupụtara oghere usoro abụọ. Otu oghere dị na ikuku, nke a na -akpọ oghere dị mpụta. Ọrụ ya bụ ikewapụ voltaji na -arụ ọrụ ma gbochie ọkpọpụta gas na -esite na ọkpọkọ ahụ. Nke abụọ na -agba ọkụ site na ike ugboro mgbapụta ugbu a; a na -arụnye nke ọzọ n'ime ọkpọ ikuku ma a na -akpọ oghere dị n'ime ma ọ bụ oghere ịgbanyụ arc. Ikike ịgbanyụ ọkụ nke njide tubular na -emetụta nha nke ugboro ike na -aga n'ihu ugbu a. Nke a bụ onye na -ejide ọkụ na -ejide oghere, nke a na -ejikarị maka nchekwa ọkụ na ahịrị ọkụ.
Ụdị njide valvụ
Ihe njide ụdị valvụ nwere oghere dị ọkụ na onye na-eguzogide efere efere. Ihe nke onye na -eguzogide efere valvụ bụ carbide silicon pụrụ iche. Ihe mgbochi mgbawa valvụ nke carbide silicon nwere ike gbochie ọkụ na oke ọkụ, yana chekwaa akụrụngwa. Mgbe enwere ọkụ ọkụ dị elu, a na -akụda oghere ọkụ, uru nkwụsi ike nke iguzogide efere valvụ na -ada, a na -ewebata ọkụ ọkụ n'ime ụwa, nke na -echebe eriri ma ọ bụ ngwa eletriki site na mmerụ nke ọkụ ọkụ ugbu a. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, a gaghị agbaji oghere ọkụ ahụ, yana uru nkwụsi ike nke nguzogide efere valvụ dị elu, nke agaghị emetụta nkwukọrịta nkịtị nke ahịrị nkwukọrịta.
Onye na -ejide zinc oxide
Zinc oxide àmụmà njide bụ ngwaọrụ nchedo àmụmà nwere arụmọrụ nchedo dị elu, ịdị arọ dị mfe, nguzogide mmetọ na arụmọrụ kwụsiri ike. Ọ na-ejikarị njiri mara volt-ampere na-abụghị linear nke zinc oxide iji mee ka ihe na-aga ugbu a site na njide pere mpe (ọkwa microamp ma ọ bụ milliampere) na voltaji na-arụ ọrụ nkịtị; mgbe njupụta na -eme ihe, nguzogide ahụ na -agbada nke ọma, na -ekupụ ume ike iji nweta mmetụta nke nchebe. Ọdịiche dị n'etiti ụdị onye njide a na onye na-ejide ọdịnala bụ na ọ nweghị oghere mwepu ma na-eji njirimara na-abụghị ahịrị nke zinc oxide wepụta wee mebie.
Ewepụtara ọtụtụ ndị na -ejide àmụmà n'elu. Ụdị njide ọ bụla nwere uru na njirimara nke ya. Ọ dị mkpa ka ejiri ya na gburugburu dị iche iche iji nweta ezigbo mmetụta nchebe ọkụ.
Oge ezipụ: Sep-29-2020
Okwu: No.217, Wei12 Road, Yueqing Economic Development Mpaghara, Yueqing City, Province Zhejiang, China
Iwu ọrụ maka nnyefe ike ...
site na nchịkwa na 21-08-20
6KV Igwe ọkụ ọkụ ọkụ dị elu
site na nchịkwa na 21-08-19
Kedu ọrụ nke ọdụ ụgbọ ala?
site na nchịkwa na 21-08-18
Teknụzụ Sensor na -eme ka obodo mara ihe
site na nchịkwa na 21-08-17
Nka imewe ise na teknụzụ indicato ...
site na nchịkwa na 21-08-16